မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးထွက်ခွာ။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရောက် အတင်းအဓမ္မမောင်းနှင်ထုတ်ခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ဆို – H2Oupdatenews
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးထွက်ခွာ။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရောက် အတင်းအဓမ္မမောင်းနှင်ထုတ်ခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ဆို
oungmarine11@outlook.com 08/12/2019	2 Comments
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဇစ်အာမက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၄-ရက်ကြာ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်စတင်ရန် ဒါကာမြို့မှ ယနေ့ထွက်ခွာသွားသည်ဟု ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဇစ်သည် မြန်မာ့တပ်မတော် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ( ကြည်း ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှစ်ဖက်အတွေ့အကြုံတို့ကို သတင်းထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ပြောဆိုသည်။
ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဇစ်သည် မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်များအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု့ ဆက်လက်ခိုင်မာရေး၊ လေ့ကျင့်မှု့ အပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေး၊ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ လည်ပတ်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရောက် အတင်းအဓမ္မမောင်းနှင်ထုတ်ခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်၊ စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်၊ တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်နှင့် စစ်ဖက်နှင့်အရပ်ဖက် ဆိုင်ရာနေရာတို့အား သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဇစ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၁-ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း၌ ဖော်ပြသည်။
(( ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သတင်းစာတို့သည် ပူလစ်ဇာတန်းမဝင်သေးသဖြင့် ကော့ခ်ဘဇားရောက် ဒုက္ခသည်အားလုံး ကို အတင်းအဓမ္မမောင်းနှင်ထုတ်ခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများဟု ရေးသားလေ့ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ် ရေးတာ ပြောတာများလျှင် အမှန်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ဆီက လေးဘက်ထောက်များအတိုင်း ယုံကြည်၍လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ARSA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် ကြောက်ရွံ့၍ ထွက်ပြေးကြသော ထိုသူများ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲတရားဥပဒေနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သူများ- ဖြစ်သင့်သူများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ခိုင်မာသော အထောက်အထားပြသနိုင်သည်ဟု စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် ဆန္ဒအလျှောက်နေရပ်ပြန်ရေး လက်ခံမည်ဟု ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်+ကုလအေဂျင်စီများနှင့် MoU လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအတိုင်းလည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ရခိုင်-သက်-မြို လူမျိုးတို့သည် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် တရားဝင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုနည်းအတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ခေတ်အဆက်ဆက်တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်နေသော ဘင်္ဂါလီ-မွတ်စလင်များရှိနေပြီး အောင်မြင် သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဘွဲ့ရပညာတတ်များ- ဂုဏ်သရေ လူကြီးလူကောင်းများ ပါဝင်သည်။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် ကော့ခ်ဘဇားရောက် စခန်းအတွင်းမှလွဲ၍ တရားဝင်လူမျိုးစာရင်းတွင် မပါဝင်သော “ လူမျိုးတစ်မျိုး “သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း မရှိပါ။
လူမျိုးအမည်အဖြစ် လူတစ်စုက ၎င်းတို့ဆန္ဒအလျှောက်ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်သည်ဆိုလျှင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သံသယပွား၊ သွေးကွဲစေသော အမုန်းစကားဖြစ်ခြင်းကြောင့် မခေါ်စေလိုသော ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း ထမင်းစားနေသော လူများဖြစ်၍ လူ့အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
မြန်မာလည်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နည်းတူ ဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ပါသဖြင့် ယခင်အင်္ဂလိပ်တို့၏ နှစ်ရာချီတရားဝင် မှတ်တမ်းများ-တရားဥပဒေများကို လိုအပ်သလို မွန်းမံ၍ ဆက်လက်အသုံးပြုလျှက်ရှိရာ မလိုအပ်လျှင် လုံးဝဖျက်သိမ်းပြီး ဆန့်ကျင်ဖက် ပြင်ဆင်သည်ဟု မရှိခဲ့ပါ။
လူမျိုးအမည်ကို ယခင် ကိုလိုနီခေတ် ရုံးသုံးမှတ်တမ်းများအတိုင်း ဆက်လက်ခေါ်ဆိုနေခြင်းမှာ မည်သည့် လူမျိုးကိုမျှ နှိမ်ချခြင်းမရှိသကဲ့သို့၊ ဘာသာရေးစော်ကားမှု့လည်း လုံးဝမပါဝင်သည်ကို အလွယ်သိနိုင်ပါသည်။
Denying their history, denying the legitimacy of the right to live where they live “ ၎င်းတို့၏ သမိုင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့နေထိုင်မှု့နှင့် ရှင်သန်ပိုင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း “ ကျူးလွန်လျှင် Genocide ရာရောက်ပါသည်။
Edition နှင့် Update လုပ်ရမြဲ စွယ်စုံကျမ်း၊ ဖတ်စာအုပ်၊ မဲလိုချင်၍ Gazette တွင် မဖော်ပြပဲ အစိုးရတစ်ဖွဲ့က ယာယီသုံးခြင်း၊ အကျင့်ပျက် လာဘ်စားဝန်ထမ်းများရေး သွင်းခဲ့သည်တို့ကို လစ်လျှူ့ရှု့သည်မှ တစ်ပါး ထိုသို့ ငြင်းပယ်ခြင်းများ လုံးဝရှိပါ။
လူမျိုးအမည်ကို ယခင် နှစ်ရာချီ ရုံးသုံးတရားဝင်မှတ်တမ်းများအတိုင်း ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ သမိုင်းစဉ်လာကြီးမားခြင်းကိုပင် ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Genocide Convention ကို ဖောက်ဖျက်ရာမရောက်သဖြင့် ICJ ၌ ကုလအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက ရည်ညွှန်း ပြောဆိုသုံးစွဲခြင်းမှာ မည်သည့် ပြစ်မှုကိုမျှ ကျူးလွန်ခြင်းမမည်ပါ။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Dhaka Tribune., December 7th, 2019, “Army chief leaves for Myanmar Sunday.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Army chief leaves for Myanmar Sunday
Published at 11:00 pm December 7th, 2019
Bangladesh and Myanmar army chiefs will discuss repatriation of Myanmar citizens from Bangladesh
Chief of Army Staff General Aziz Ahmed will leave Dhaka for Myanmar on Sunday onafour-day official visit.
General Aziz is scheduled to meet Deputy Chief of Myanmar Armed Forces and its Army Chief Vice Senior General Soe Win, an Inter-Services Public Relations (ISPR) press release said on Saturday, reports BSS.
During the meeting, the two army chiefs will discuss further strengthening the friendly relations between the two military forces, training exchanges, making goodwill visits, increasing mutual cooperation, and repatriation of forcefully displaced Myanmar citizens from Bangladesh.
During his stay, General Aziz Ahmed will also visit various military and civil establishments including Myanmar National Defence College, Command and Staff College, and Military Museum.
2 Replies to “မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးထွက်ခွာ။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရောက် အတင်းအဓမ္မမောင်းနှင်ထုတ်ခံရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ဆို”
Q3OLE0J1LO www.yandex.ru says:
19/08/2020 at 5:27 AM
DMHYPBH4RE7 www.yandex.ru says:
Previous Previous post: အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်း လူ ၄-ဦးသေဆုံးရသော သေနတ်ပစ်ခတ်မှု့တွင် ကျူးလွန်သူမှာ ဆော်ဒီပညာတော်သင် စစ်ဖက်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်နေ။ အမေရိကန်၏ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ၊ မွတ်စလင်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှု့တို့အတွက် လက်တုန့်ပြန်ခြင်းဖြစ်ဟု ဆို
Next Next post: ကော့ခ်ဘဇားတွင် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီဒါးပြဂိုဏ်းများအချင်းချင်း ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်၍ လူသေဆုံးဟု ဆို။ ကူတူပါလောင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆိုင်ရာရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအသင်း ( ARSPH ) ကို ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရက ချိတ်ပိတ်။ အသင်းလှုပ်ရှားမှု့များ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်